Real Estate Market Hopefully to Recover Soon | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalReal Estate Market Hopefully to Recover Soon
Real estate service providers in Yangon hope to see the local real estate market, which has been inactive since early April, recovers in upcoming weeks.
“We hope the real estate market, both rental and sales, will get better soon since there isapossibility of opening up to the international relations in the coming weeks,” Daw Moh Moh Aung, General Secretary of Myanmar Real Estate Services Association, told Myanmar Business Today.
At the moment, properties worth K50-100 million were sold out while the rental market saw only demands for apartments with the rental rate of K100,000-150,000.
“The rental demand is low because only those who actually need to move out look foranew apartment,” she added.
The transaction in the real estate, both rental and sales, significantly dropped, especially the condominium rental market, which heavily relies on the foreign expatriate, who returned home due to the pandemic.
The construction sector, which abruptly stopped in April, has now returned to its full capacity.
Covid-19ရောဂါကြောင့်အေးစက်နေသော အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်သည် လာမည့်သတင်းပတ်အတွင်း ပြန်လည်သက်ဝင်လာနိုင်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တို့ထံမှ သိရသည်။
“လာမယ့် အပတ်လောက်ဆို နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်တွေ ကောင်းလာမယ်၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလည်း အဆင်ပြေလာနိုင်တော့ အရောင်းအငှား နှစ်ခုလုံး ပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မို့မို့အောင်က Myanmar Business Today ကိုပြောသည်။
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဧပြီလဆန်းခန့်က စတင်ကာ အရောင်းအဝယ် မရှိသလောက် ကျဆင်းသွားခဲ့ရာမှ လာမည့်သတင်းပတ်တွင် ပြည်လည်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ခန်းမှန်းရသည်။
ယခုကာလအတွင်း သိန်းငါးရာတန်မှသိန်းတစ်ထောင်တန် အိမ်ခြံမြေအနည်းငယ်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အငှားစျေးကွက်တွင်လည်း တစ်သိန်းမှ တစ်သိန်းခွဲ အခန်းတချို့အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ဒေါ်မို့မို့အောင်က ပြောသည်။
“အငှားစျေးကွက်ကတော့ မဖြစ်မနေထပ်ငှားရမယ့် နေထိုင်သူ တချို့ထပ်ငှားကြရတာပါ” ဟု ဒေါ်မို့မို့အောင်က Myanmar Business Today ကိုပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသားအငှားကိုသာ အားထားနေရသည့် ကွန်ဒိုအငှားဈေးကွက်မှာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် နိုင်ငံခြားသားအများစုမှာ နေရပ်ပြန်ကြသဖြင့် အခန်းပြန်အပ်သူများလာပြီး ငှားရမ်းသူမရှိသလောက် ရှားပါးနေကြောင်းလည်းသိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာ ဧပြီလအတွင်း ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရသည့် အခြေအနေများ ကြုံတွေ့နေရပြီး ယခုအခါ ပြန်လည်သက်ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။
Previous articleYoma to AcquireaControlling Stake of Wave Money
Next articleMyanmar Finally to EstablishaPension Fund